Uyaziqhenya uBaxter ngeBafana yabafana abancane | Isolezwe
Uyaziqhenya uBaxter ngeBafana yabafana abancane
Ezemidlalo / 17 July 2017, 1:52pm / Mthokozisi Mncuseni
UGIFT Motupa ongomunye wabadlali abanconywa umqeqeshi weBafana Bafana uStuart Baxter ngokuyibamba kwiCHAN Isithombe: BACKPAGEPIX
UZISHAYA isifuba ngezinqumo zakhe ngabadlali abasebenezise kweyokuhlungela i-African Nations Championship (CHAN) umqeqeshi weBafana Bafana, uStuart Baxter osize leli qembu linqoba ngo 2-0 kuBotswana kowomlenze wokuqala wokuhlungela lo mqhudelwano obuseFrancistown ngoMgqibelo enyakatho nekomkhulu iGaborone.
Kulo mdlalo uBaxter ubexube abadlali asebeqinile kanye nalabo abasaqala ukungena eqenjini lesizwe. Lo mqeqeshi uthi uye kuwona engacabangi ngenduku ngoba kuyena ukuwina akukona akubheke kakhulu emiqhudelwanini yalolu hlobo kepha ugxile kakhulu akuzwiseni abafana abancane ubumqoka bokugqoka ijezi leBafana Bafana.
Njengoba bekulindelekile iBotswana iyona ebiphethe ibhola isikhathi esiningi njengeqembu lasekhaya kodwa abafana bakaBaxter bekuthi uma belithola balisebenzise ngendlela njengoba benzile oRyan Moon noGift Motupa ngamagoli ngokwahlukana kweziwombe.
“Okwenza ngizishaye isifuba ngezinqumo zami ngabadlali yindlela abalisukumele ngayo ithuba abalitholile abadlali abanami la ekhempini. Abaningi baqome ukuya emaholidini kodwa laba bavuma ukuba nathi lapha. Abadlali abancane ubabona ngisho ebusweni ukuthi balambele ulwazi bese kubakhona abanjengoMario (Booysen) noCole (Alexander) abalokhu bemile ngokubadonsa ngesandla uma kufanele. Ngijabule kakhulu ngalo mphumela ngoba ngiyazi ukuthi ulethwe ukuthi abadlali (abadala nabancane) bahlale kulokhu ebesikuhlelile,” kusho uBaxter esitatimendeni seSafa.
Mayelana nomdlalo uBaxter uthe bekunzima kodwa abadlali bakhe abancane njengoTebogo (Mokoena) bakhombisile ukuthi bakulungele ukukhuphuka kuleli qembu lesizwe uma bedingeka.
“Besihlelile ukuthi singalibangi nabo ibhola ngoba badlalela ekhaya kepha silinde amaphutha abo. Nangempela benze elokuqala sathola igoli okubenze badinga ukusondela kithina. Lokhu kubavulile emuva sathola elesibili.”
“Ngiyazi abaningi bazothi asiwuhloniphi lo mqhudelwano ngokukuwudlala ngabafana abancane kodwa ekugcineni sizosizakala thina emizamweni yethu yokwandisa isibalo sabadlali abahlukene kuBafana esikhathini esizayo. Okuhle engikubonayo ukuthi kuyakheka kulaba bafana uthando lokugqoka ijezi leqembu lesizwe. Abaningi bangababuka bangabanaki laba badlali esinabo lapha ekhempini kodwa kusasa yibona esizobe sithembele kubona kuBafana emiqhudelwaneni emikhulu emhlabeni.”
Uthe nakuba ezozenza izinguquko kowomlenze wesibili kodwa zizobe zincike kakhulu ekuhleleleni umdlalo ngoba uzobe usuhlukile kunowasekuhambeni. IBafana ibuye kuleli namuhla. Izobe isiqonda eRusternburg lapho iyoqala khona amalungiselelo owomlenze wesibili ongoMgqibelo ngo-3 ntambama, eMoruleng Stadium.
Isitobha uMalebo Modise sithintekile kodwa akubukeki kungaba yinto eyinkinga kangako. Uzoziqeqesha nabanye namuhla uma sebefikile eRustenburg.